Iingcebiso ezili-10 zomsebenzi wokuqala njengomyili | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iingcebiso ezili-10 ezisisiseko zomsebenzi wakho wokuqala njengomyili
UManuel Ramirez | | ngokubanzi, Amaqhinga
El Umsebenzi wokuqala wenziwe Njengoyilo, unenxalenye yoloyiko kunye nolonwabo oluninzi ngokuthatha inyathelo lethu lokuqala kweli hlabathi lobungcali alikho lula kwaphela, kwaye ngakumbi ukuba sikwenza ngokuzimela okanye sisodwa. Ukusilela kwamava kunokusetyenziswa ngumthengi onokuthi asebenzise thina.
Ke masiphe Iingcebiso ezili-10 ezilulas kunye nezinto eziyimfuneko kuloo msebenzi wokuqala njengomyili ukuze ungazifumani njengemvana phambi kwelo lizwe laseAfrika lizele ziingonyama, iimpisi kunye nezilwanyana zasendle eziya kuzama ukukutya.
1 Musa ukunika abathengi bakho ukhetho oluninzi
2 Isebenza ngokwamanqanaba amathathu.
3 Chaza izigaba zomsebenzi ezintathu kumxhasi wakho ukuze bazi ukuba yintoni abanokuyenza
4 Gcina ii-imeyile zakho zimfutshane kwaye zicacile
5 Funda ukuthengisa iinkonzo zakho
6 Zama ukwenza ngathi uyayazi le nto uthetha ngayo
7 Zinike kunye nomthengi kabini ixesha
8 Thetha malunga nabanye abathengi bakho
9 Ukuhlawuliswa ngokuhlawula kade
10 Ukuba umxhasi akahlawuli ...
Musa ukunika abathengi bakho ukhetho oluninzi
Ngale nto kuphela kwento oya kuyifumana iyakukubhida.
Isebenza ngokwamanqanaba amathathu.
Umthengi unokutshintsha kuphela "into" ngezi zigaba:
Inqanaba lokuqala-Umthengi unokukhetha kuphela ezimbalwa, uninzi lweendlela ezi-7
Kusemva komsebenzi: umthengi unokwenza utshintsho kumbala okanye ezinye izinto ezibalulekileyo
Umsebenzi wokugqibela-Umthengi unokwenza kuphela utshintsho oluncinci kuyilo. Oku kuya kuthatha ubuninzi bemizuzu emi-5 ukuya kweli-10 yomsebenzi
Chaza izigaba zomsebenzi ezintathu kumxhasi wakho ukuze bazi ukuba yintoni abanokuyenza
Gcina ii-imeyile zakho zimfutshane kwaye zicacile
Ayinamsebenzi konke oko ukuchitha ixesha lakho kwii-imeyile ezingenakubalwa eziphendula umthengi
Funda ukuthengisa iinkonzo zakho
Abathengi bathanda ukuthanda izinto ezinje ngokuba uya kuhlawulisa ilogo, kodwa oko uza kwenza into simahla, njengoko kunokuba netywina lokuyistamp. Apha uyakufumana indlela yokubonelela ngento ukuze ugcine ingqalelo yabo.
Zama ukwenza ngathi uyayazi le nto uthetha ngayo
Akunyanzelekanga ukuba ujonge njengobungcali ngokuba yingqele, kodwa iyenza kwakhona intwana yobomi bemihla ngemihla ilahlekile okanye wonwabe ungakhange ugqithise.
Zinike kunye nomthengi kabini ixesha
Kubalulekile ukuba yazi ukulinganisa amaxesha, ke kunomdla wokuzinika kabini xa ucinga ukuba kuya kuthatha ukugqibezela iprojekthi. Kuba ukuba ugqiba kwangoko, uyakubonakala umhle kakhulu kuye. Ukuba endaweni yoko yenzeka ngenye indlela, kukuthatha iintsuku ezintathu kwisiphelo sendlela, iya kunika inkangeleko echaseneyo.
Thetha malunga nabanye abathengi bakho
Ukuvakala ngathi unabaxhasi abangaphezulu kwesinye, Thetha ngabanye ke banoluvo lokuba baya kuthatha ixesha lakho xa befuna iinkonzo zakho.
Ukuhlawuliswa ngokuhlawula kade
Ukuba umxhasi akahlawuli ...
Thumela wonke umsebenzi owenzileyo kwi-intanethi kwaye unike umsebenzi kwabanye abantu abazisebenzelayo ukuba basebenzise simahla kunye nokuthumela malunga nomthengi wakho. Thumela iinkcukacha zakho zonxibelelwano ukuze bazi abanye
Siyakushiya ngeengcebiso ezingama-20 ezibalulekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Iingcebiso ezili-10 ezisisiseko zomsebenzi wakho wokuqala njengomyili
Zonke iingcebiso zinomdla kakhulu, kodwa ndinamathandabuzo ngamanqaku amabini okugqibela. Ukuba ungandinika ulwazi oluthe kratya ukuze ndiqonde ngokupheleleyo, ndingavuya.
Zithini iingcebiso? umbuzo :)
Abatywini beMadrid sitsho
Nditsho ukuba i-fiasco akufuneki ibekho, ibonakala iluncedo kum, yenye yeendlela, ndithi, masihambe.
Phendula uMbambi weMadrid
AKUKHO wonke umntu olifaneleyo ingcebiso efanayo kuba wonke umntu akanayo inqanaba elifanayo, umzekelo iluncedo kum.
Guqula iifoto zakho ngezihluzo zobugcisa zikaPrisma
Ezona zinto zixhaphake esitratweni zezona zilungileyo zezona zikipa zoyilayo